मनोरञ्जन – America Nepal
Wednesday, August, 2017
यी जवान देखिने महिलाहरूको उमेर ६० काटेको भन्दा तपाई पत्याउनु हुन्न होला
अमेरिकाले गरेको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा ३५२ सर्वसाधारणको मृत्यु
‘कानमा औँला हाल्यो भने पनि बलात्कार ?’
दीक्षा चापागाँइको घरमा काम गर्ने महिला कसरी दुई जीउकी भइन ?
केटाहरु आउँछन्,कोहीसंग दाइजोको कुरा मिल्दैन त कोहीसंग शरीरको
आफ्नै आखाँ अगाडि जन्मदिने आमालाई दिशा खुवाएर कुटपिट गरी हत्या गरेको १० बर्षीय छोराको बयान (भिडियो)
रत्नपार्कमा प्रेमीले छोडेर भौतारीरहेकी एक युवतीको पिडा
दीक्षा चापागाईले धरधरी रुदै भनिन -‘यो समाजले फालेका, छोराले फालेका, श्रीमानले फालेका मानिसहरुको पनि मैले सेवा गर्न नपाउनु ?
करिश्माले खोलिन मुख – आयोजक हराउँदा होटलको बिल आफै तिरेर फर्किनु पर्यो
नक्कली तरकारीवाली र सरकारीवाला वीच वार्ता , प्यारोडी ( भिडियो हेर्नुहोस )
भिजाएको बदामलाई दैनिक सेवन गर्दाका पाँच फाइदा
7 days ago Uncategorized America Nepal
जुन खानामा एसिडको मात्रा धेरै हुन्छ त्यसलाई यदि खाली पेट खाए एसिडिटीजस्ता स्वास्थ्य समस्या हुनसक्छ । त्यसकारण ग्रेटर कैलाश हस्पिटलकी चिफ डाइटिशियन डा. विनिता जयसवाल बिहान खाली पेटमा यस्तो खानेकुरा खाने सल्लाह दिन्छिन् जो स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । यीमध्ये बदाम (एल्मोन्ड)लाई निकै स्वस्थकर मानिन्छ । भिजाएको बदामलाई दैनिक सेवन गर्दाका पाँच फाइदाबारे जानकारी दिइएको छ । किन खाने ? बदामको बोक्रामा टेनिन हुन्छ जसले यसको पौष्टिक तत्वलाई शरिरमा अवशोषित हुनबाट रोक्ने गर्दछ । भिजाउँदा बदामको बोक्रा सजिलै निस्कने गर्दछ र यसको पौष्टिक तत्व शरिरले निकै राम्रो तरिकाले पाउने गर्दछ । त्यसकारण डाइट एक्सपर्ट भिजाएको बदाम खाने सल्लाह दिन्छन् । बदामका फाइदाः बदाममा आइरन, क्याल्सियम, फस्फरोस, भिटामिन ‘ई’, कार्बोहाइड्रेट, पोटासियम, म्याग्नेसियम
गौचनको हत्या बारे विस्तृत जानकारी, हेर्नुस
1 week ago Uncategorized America Nepal
काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको सोमबार दिउँसो नयाँ बानेश्वरको खरिबोटमा गोली हानी हत्या गरिएको छ । अज्ञात व्यक्तिहरुले खरिबोटको प्रयाग मार्गमा।
पुदिना सेवन गर्नुको यी चमत्कारिक लाभ
यतिबेला धेरैको करेसा बारी, खेती वा गमलामा पुदिना लहलह भएको होला । बर्षायाम सुरु भएसँगै पुदिना मौलाएर आउँछ । पुदिनाको अनेक फाइदा छन् । यसको स्वाद मीठो हुन्छ । सुगन्ध पनि उत्तिकै तिख्खर ।।
नेपाली क्रिकेटको विवादः ‘निर्वाचित’ क्यानले आइसीसीलाई किन ‘सहयोग’ गरेन ?
२०७३ श्रावण २३ आइतबार राजनीति5प्रतिक्रिया
जिल्लामा रु १४ करोड ९६ लाख २८ हजार विद्युत् महसुल उठाउन बाँकी रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भद्रपुरका अनुसार विर्तामोड, भद्रपुर र दमक वितरण केन्द्रअन्तर्गत सरकारी कार्र्यालयबाट सो रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ । आव २०७२÷७३ मा भद्रपुर वितरण केन्द्रबाट रु ६ करोड ३१ लाख ८२ हजार महसुल उठ्न बाँकी रहेको सो केन्द्रका प्रमुख रोशन खड्काले जानकारी दिए । त्यसैगरी विर्तामोड वितरण केन्द्रको रु तीन करोड ३८ लाख ४५ हजार र दमक वितरण केन्द्रको रु पाँच करोड २६ लाख बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।
कान्छी खेलाडी गौरिकाको प्रतिस्पर्धा आज
Admin २०७३ श्रावण २३ आइतबार राजनीति
रियो ओलम्पिककी कान्छी खेलाडी गौरिका सिंहले आज पौडीमा प्रतिस्पर्धा गर्दै्छिन्। उनले आईतबार महिला सय मिटर ब्याकस्ट्रोकमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेकी हुन्।
जिल्लामा रु १४ करोड ९६ लाख २८ हजार विद्युत् महसुल उठाउन बाँकी रहेको छ द्रअन्तर्गत सरकारी कार्र्यालयबाट सो रकम असुल गर्न बाँक ६ ुल उठ्न ्द्रका प्रमुख रोशन खड्काले जानकारी दिए । त्यसैगरी विर्तामोड वितरण केन्द्रको रु तीन करोड ३८ लाख ४५ हजार र दमक वितरण केन्द्रको रु पाँच करोड २६ लाख बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।